Ahoana no fomba hanaovana drafitra fiainana: Dingana 6 tokony hataonao - Blog
Ahoana no fomba hanaovana drafitra fiainana: Dingana 6 tokony hataonao
Ny kanton'ny fiainana dia toy ny tolona noho ny mandihy, raha mbola vonona hiatrika fanoherana ny tsy nahy sy ny tsy nampoizina izy, ary tsy mety hianjera. - Marcus Aurelius, Fisaintsainana
Ny fiainana dia mitondra fihodinana tsy ampoizina maro. Mety manana faniriana fatratra ny hahatanteraka zavatra iray manokana ianao fa ho voatafika noho ny toe-javatra tsy ampoizina.
Rehefa dinihina tokoa, ahoana no ahalalanao fa tsy ho voaray ao amin'ilay oniversite ianao? Tsy salama tsara ho an'io asa io ve? Tsy nahafantatra ve izany fa tsy hisy vokany ny fifandraisana?
Mety toa tsy mahomby ny famolavolana drafitra fiainana raha tsy fantatsika izay ho avy rahampitso.
Raha ny marina, ny mifanohitra amin'izay no marina. Ny tsy fahafantarantsika izay hoentin'ny rahampitso no antony tsara indrindra hampivelarana drafi-piainana.
Ny drafitra fiainana voahevitra tsara sy be fieritreretana dia afaka miasa ho toy ny kompas anao rehefa manandrana mamantatra ny fomba hirosoana sy hahita fahombiazana amin'ny fiainanao ianao - na ho toy inona izany fahombiazana izany. Azonao atao foana ny miverina amin'ny drafitry ny fiainanao rehefa mikorontana ny rano ary atsipy manodidina ianao.
Hanampy anao amin'ny tany izy io, handinika ny safidinao ary hitady fomba bebe kokoa handrosoana raha toa ka ataonao tsara izany.
Andao hametraka fototra vitsivitsy amin'ny drafitry ny fiainanao. Hanampy anao ny manoratra ireo zavatra ireo na manoratra azy ireo ao anaty rakitra fanodinana teny.
1. Diniho izay zava-dehibe aminao.
Ny olona tsirairay dia manana kompà ao anatiny izay manandrana mitarika azy ireo amin'ny lalana iray. Ary tsy miresaka momba ny kompà moraly fotsiny isika fa ny kompà izay manondro ny làlan'ny filana sy ny filanao fiainana.
Tia biby ve ianao? Art? Siansa? Manampy olona? Inona no miteraka spark ho anao?
Ary raha tsy manana bara ianao izao, inona no namorona baraingo ho anao taloha?
Makà fotoana kely hieritreretana ny lalan'ny fiainanao hatreto. Fa maninona ianao no nanenjika ny zavatra nataonao? Raiso ny asa nekenao? Niditra tamin'ny fifandraisana izay nataonao? Misy lohahevitra ve eto?
Ary ny tena zava-dehibe, ity traikefa ity ve no tianao hotohizana sy hamboarinao amin'ny hoavinao?
Tsy maninona ny manova lalana raha tsy tsapanao intsony ilay misy anao. Saingy mety manararaotra ny fanaovana pivot amin'ny làlana izay efa alehanao fa tsy manomboka amin'ny voalohany.
Ny famaritana ny kompasanao dia hahamora kokoa ny mitady ny làlana mety aminao.
Zava-dehibe, ity dingana ity dia mitaky anao hanao ny marina tanteraka amin'ny tenanao momba izay misy Raha ny marina manan-danja aminao manohitra izay anao Eritrereto dia zava-dehibe na tokony zava-dehibe.
Ny fandrosoana amin'ny asan'ny tena dia ohatra tsara iray amin'izany. Betsaka ny olona mahita ny fandrosoana amin'ny tohatra sy ny valisoa ara-bola aterak'izany ho zava-dehibe amin'izy ireo. Saingy, rehefa manomboka mitanisa izay manome azy ireo izy ireo, dia tsy tonga eo akaikin'ny tampony ny asany, na indraindray tsy ao anaty lisitra mihitsy.
Mino fotsiny izy ireo fa ny fanaovana tsara amin'ny asa sy mahazo fisondrotana dia izay tokony hataonao eo amin'ny fiainana. Hevitra miorina amin'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina fahombiazana ary tsy anontaniany izany. Fa tokony.
Izay rehetra miditra amin'ny drafitry ny fiainanao dia tokony hiorina amin'ny fahatsoran'ny tena manokana.
2. Diniho izay mitondra anao fahasambarana sy fifaliana.
Matetika dia miasa mafy ny fanatanterahana zavatra mendrika. Toa tsy izany foana no izy, raha ny fijerin'ny olona ivelany. Indraindray ny hany hitantsika dia ny etona. Tsy hitantsika ny ora maro amin'ny fianarana, fanomanana, fiasana na fiofanana mety hitranga ao ambadiky ny varavarana mihidy.
Ary na dia ilaina aza ny fananana faniriana marina mitady làlana sy hanatratra ireo tanjona napetrakao dia tsy maintsy mitazona fifandanjana amin'ny fiainanao ianao. Tsy afaka miasa mandritra ny fotoana rehetra ianao raha tsy mirehitra amin'ny fomba mahavariana.
Ny famolavolana drafitra misy zavatra izay mitondra anao fahasambarana sy fifaliana dia hitondra anao mandritra ny fotoan-tsarotra ary hanampy amin'ny fanefana ireo fanambin'ny asa tokony hataonao. Ny fandinihana ireo zavatra mitondra fahasambarana anao dia afaka manampy anao ho salama, hampiasa vola bebe kokoa ary hifantoka amin'ny tanjonao.
Betsaka ny olona manao tsirambina ny hikolokoloana ny fahasambarany raha mbola eo am-piasana mafy izy ireo ary mahatratra ny tanjony ambony. Fa ny fanatsarana sy ny fitazonana ny fahasalamanao dia ilaina amin'ny fahombiazana amin'ny drafitrao.
3. Diniho ny fikolokoloana tena izay manampy anao ho salama hatrany.
Ny fahasambarana dia azo raisina ho ampahany amin'ny fikarakaran-tena, fa izahay kosa mila mahazo antoka fa hikarakara bebe kokoa noho ny saintsika fotsiny.
Ny sakafo nohaninao sy manao fanatanjahan-tena matetika dia mahatalanjona manampy anao hahomby. Manome anao ny angovo ilainao ny sakafo, ary ny fanatanjahan-tena dia manampy amin'ny fitazonana ny vatanao amin'ny filaminana tsara.
Aza atao ambanin-javatra ireo zavatra ireo amin'ny fikatsahana ny tanjonao. Ampidiro ao amin'ny drafitry ny fiainanao ny fanatsarana sy fihazonana ny fahasalamanao ara-batana. Ny fomba mora indrindra anaovana izany dia ny fandaharam-potoana amin'ny fampihetseham-batana, miala sasatra ary manome azy ireo lanja mitovy amin'ny tanjonao hafa. Amin'izay dia azonao antoka fa manokana fotoana hikarakarana tena ianao.
4. Farito ny tanjonao kely sy lehibe.
Ny fametrahana tanjona dia fahaizana lehibe hampiroborobo izay hanampy anao hampandroso ny drafi-piainanao.
Ny tanjona lehibe rehetra ifantohan'ny masonao dia fitambarana tanjona kely kokoa mifampitohy. Ireo tanjona goavambe dia toa tsy dia lehibe loatra rehefa aparitanao amin'ny sombin-javatra kely kokoa ary iasanao amin'ny fanatanterahana ireo izay nahavita tsy tapaka.
aj lee sy cm punk
Inona avy ireo tanjona lehibe hitanao? Aiza no ahitanao ny tenanao ao anatin'ny dimy taona? Folo taona? Dimy amby roapolo taona? Iza no olona tianao ho tonga?
Rehefa mametraka ireo tanjona ireo ianao dia afaka miasa mihemotra hametraka ireo tanjona kely. Andao lazaina fa te ho injeniera ianao. Mila mahay tsara amin'ny matematika ianao, mandeha any am-pianarana, miasa amina fiofanana ary azo inoana fa handeha any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa hiomanana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny sehatra.
Ny tsirairay amin'ireo tanjona kely kokoa ireo dia misy tanjona kely kokoa aza. Angamba mila maka taranja vitsivitsy ianao hanadiovana ny matematika alohan'ny hampiharana am-pianarana. Angamba mila manao fikarohana ianao mba hahazoana antoka ny famatsiam-bola ho an'ny sekoly. Angamba mila mandefa fampiharana ianao.
Ireo tanjona apetrakao dia hanampy anao handrehitra ny lalanao rehefa manomboka manontany ianao: ahoana no fomba hanatanterahako an'io tanjona io?
5. Mamorona drafitra azo tratrarina mba hahatratrarana ireo tanjona ireo.
Ny tanjona tsy misy drafitra dia faniriana fotsiny. - Antoine de Saint-Exupéry
Ampiasao toy ny lohateny ny tanjona tsirairay. Rehefa mikaroka ny fomba hanatanterahana ny tanjonao ianao dia manorata lisitr'ireo zavatra tokony hataonao eo ambanin'ny lohateny tsirairay.
Ity firaketana ity dia hanampy anao handroso satria ho fantatrao izay nanandramanao, inona no mbola tsy nataonao, ary afaka manampy anao hamorona hevitra vaovao izy io rehefa tsapanao fa mijanona ianao.
Avereno jerena ireo drafitra ireo rehefa mahatratra ny tanjonao hanao fanitsiana ianao rehefa mipoitra ny fanambin'ny tanjonao.
Indraindray mety ho sarotra ny mamantatra ny fomba hanatratrarana ireo tanjona ireo. Ny iray amin'ireo fomba tsara kokoa dia ny mitady olona efa nahavita izay kasainao hatao. Afaka manondro anao amin'ny lala-mahitsy izy ireo ary manampy anao hisoroka ny sasany amin'ny fandrika mahazatra amin'ny fanarahana io làlana manokana io.
Raha te hianatra any amin'ny oniversite ianao dia mety te hiresaka amin'ny mpanolo-tsaina amin'ny oniversite izay afaka manampy anao handray fanapahan-kevitra sy handamina ny lalanao amin'izany.
Asa na mpanazatra fiainana manana traikefa amin'ny zavatra tianao hatao dia mety ihany koa. Tandremo fotsiny sao misy olona manome toky tsy azo tanterahina.
6. Avereno jerena tsy tapaka ny fandrosoanao sy ny drafitry ny fiainanao.
Rehefa mihalehibe ianao ary mandroso miaraka amin'ny drafitry ny fiainanao dia maniry ny hijanona tsindraindray ianao ary hamerina handinika izay ataonao sy ny antony.
Ara-dalàna raha miova ny fomba fijerinao sy ny tanjonao rehefa mihalehibe ianao ary mianatra zava-baovao. Mazava ho azy fa 21 taona ianao no maniry zavatra hafa noho ianao 45 taona. Saingy ny zava-mitranga amin'ny fiainanao dia mety hidika fa ny laharam-pahamehanao sy ny tanjonao dia miova haingana kokoa noho izany.
rey mistery tsy misy sarontava
Mety hahatratra tanjona manokana ihany koa ianao ary hahita fa tsy araka ny noeritreretinao azy ireo izany. Tsy maninona ny manova lalana, mametraka tanjona vaovao, ary manonofy nofy vaovao raha izany no tadiavinao.
Ny drafitry ny fiainanao dia tsy voafaritra tsara. Izy io dia antontan-taratasy velona izay tokony hitsidihanao matetika, hamerenana, ampidiro ary indraindray esorina.
Ary inona no tsy tokony hatao amin'ny drafitry ny fiainanao…
Aza variana loatra amin'ny làlana tokana ka manjary jamban'ny mety hitranga ianao. Ny fanatanterahana ny tanjonao dia mety hanokatra varavarana hafa na fanamby tsy nampoizinao.
Avelao ny tenanao ho malefaka rehefa mandroso ianao mba hahafahanao miondrika amin'ireo fanamby atrehanao. Ny marimaritra iraisana dia mety tsy araka ny tadiavinao, fa indraindray dia mety hahatonga anao hanatratra ny tanjonao lavitra.
Azonao atao ny mametra tanjona manokana, saingy mila maninona ianao raha tsy mihaona amin'izy ireo koa. Toy ny hoe, 'Te ho dokotera aho amin'ny faha-30 taonako.' Angamba handeha izany, mety tsy hisy. Angamba ianao manana olana ara-pahasalamana hiatrehana, na tsy afaka mandeha any an-tsekoly, na bevohoka tsy ampoizina, na zavatra hafa mety hanakorontana mafy ny drafitrao.
Tsara ny mitazona hevitra momba ny fomba sy ny fotoana itiavanao zavatra, aza manambola be loatra amin'izany fa manimba ny fahasalamanao raha tsy afaka manaraka ny lalanao ianao. Indraindray tsy mandeha fotsiny ny raharaha ary tsy maninona.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hamoronana drafi-piainana? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana no fomba hanaovana zavatra amin'ny fiainanao: 6 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Dingana 8 hahitana fitarihana eo amin'ny fiainana raha tsy manana ianao
Ohatra 11 amin'ny fanambarana tanjona kendrena amin'ny fiainana azonao raisina
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny tanjonao feno: 11 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
10 Fomba mahomby be hahitana izay fahaizanao
8 Tsy misy fomba Bullsh * t hifehezana ny fiainanao
Torohevitra manan-danja 11 Raha tsapanao fa tsy mandeha na aiza na aiza ny fiainanao
Ahoana no fomba handresena amin'ny fiainana: toro-hevitra 10 mahomby be!
ahoana no ilazana fa ao aminao izy
ny fomba hiatrehana ireo ankizy lehibe tsy manaja
handao an'i wwe i dean ambrose
ny hanao firaisana ve no tadiaviny
inona no dikan'ny hoe manana olana amin'ny fandaozana
inona no hatao rehefa tianao ny bandy